Nahazo Professeur 4 ny hospital ben’i Toamasina
Niampy isan’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona aty amin’ny faritra atsinanana
Lanonana lehibe tetsy amin’ny hopitaly be teto Toamasina ny andron’ny zoma faha 8 may 2015. Natolotra ho an’ny vahoaka ny Toamasina ireo tanora 9 nahavita fianarana mahakasika ny fahasalamana hanamafy rafitra ny CSBII ny faritanin’ny Toamasina. Misy ireo voatendry hiasa any Anosibe anala, Moramanga, Sainte Marie, teo ihany koa no nanolorana ireo profesora mpandidy 4 hiasa eto Toamasina sy ampita fahalalana hoan’ireo mpianatra medicine ao amin’ny anjerimantolo Toamasina. Nisy ihany koa ny fijerena ifotony ny fotodrafitrasa nasiana fanatsarana tao amin’ny Hopitaly be Toamasina, ny trano fandidina.
Fisaorana no natolotr’ireo nifandimby nandray fitenenana ho an’ny fanjakana foibe tamin’ny nazaohana ireo mpitsambo ireo tsy adino ihany koa ny minisiteran’ ny fahasalamana izay angady sy vy nahitana ho entina hanasoavana ny Vaohaka Malagasy.
Tao anatiny kabarin’ny minisitrin’ny fahasalamam-bahoaka no nilazany ny politika fiaikina zato andron’ny goverinemanta ka tanterahiny minisitera ihany koa karakarao tsara ireo fotodrafitrasa ataovy izay hatamana ireo mpitsambo ary nanafatra ireo tanora 9 vao nahazo toerana hiasana ihany koa izy mba hanatanteraka ny asan’izy ireo.
Ny lanonana dia teo ambany fitariany ireo manampahefana teto Toamasina Prefect Toamasina, Lehiben’ny faritra Atsinanana, Lehiben’ny Alaotra mangoro Lehiben’ny faritra Analanjirofo, ny fianakaviam-ben’ ny fampianarana ambony sy ny avy ao amin’ny fahasalamana teto Toamasina.
(104) Marcelline : 09-05-2015 - 08:15